Bisharo Wacdi Xaqiiqda ka Dambaysa Qabashadeeda? – Rasaasa News
Feb 15, 2010 bisharo, hargeysa, Jwxo-shiil, ONLF, punland
Saraakiisha ugu muhiimsan kooxda Jwxo-shiil, wax qarsoon ma ah oo waxay joogaan Hargeysa iyo Galkcayo, halkaas ayeyna wararka ka soo diraan, oo ay xaasaskoodu degan yihiin dabayshana kaga gabadaan, dadna waa la qabtaa oo xabashaa loo dusiyaa “hashu maankaygii gadaye ma masaar bay liqday.”
Waxaanu maanta idiinsoo qadimaynaa sheeko dhab oo aydaan is dhaafin karin dadweynaha Somalida Ogadeeniya, hadii aad in badan is dhaafiseen qoraalada aanu idiin soo bandhigno ee dhabta ku salaysan, salkana ugu dhigayno halganka.
Bisharo Wacdi Shaqlane, waxaa ay ka mid ahayd gabdhaha ugu magaca dheer gabdhaha Somalida Ogadeeniya ee ku magac bixiyey halganka ay waday Onlf. Gabdhahaas qaaliga ah waxaa ka mid ah Bisharo Wacdi, Roda Afjano, Cambaro Dheer iyo Xabsa Macalin. Xabsa iyo Bisharo oo reer Qoraxey ah Xabsi la qorsheeyey ayey dhex hurdaan, Cambaro Dheer iyo Roda Afjano oo ah reer Jarareed dalalka reer galbeedka ayey nabad iyo guri dugsoon dangiigaan. Labada Gabdhood ee dambe waxaa dibada keenay ururka ONLF intii uu Jwxo-shiil, waxbaan gudoomiye ahay lahaa ee uu ummada kala guraayey [qisada afartan gabdhood qoraal gaara ah ayaan ku eegidoonaa].
Bisharo Wacdi oo laga qabtay Hargeysa 10/02/10, waxaa qabashadeeda ka dambeeyey ninka maldahan ee Sulub Cabdi Axmed, [kuna hadala afarta luugo somali,xabshi,Oromo iyo Tigray] wakiilka uga ah jwxo-shiil Tigrayga. Dhawr goorna Xabsiga Harar galay lana soo daayey, dhib badana u gaystay jiritaanka ururka ONLF.
Sulub iyo , wiilka Wayteen ee uu Jwx-shiil abtiga u yahay Cabdi Cabdulahi, waxaa weeye ragii abaabulay dilkii Dr. M S Dolal, waxayna Hargeysa yimaadeen 02/02/10. Laba maalmood ka hore inta aan bisharo la qabanin ayuu wiil ka mid ah Jaaliyada taageerta kooxda Jwxo-shiil, ku arkay Sulub xero ciidan wardoon oo ay Itobiyaanku ku leeyihiin Hargeysa. Wiilka oo la yidhaahdo Xasan Bile, ayaa u sheegay qaar ka mid ah jaaliyada wayse ka diideen iyaga oo leh “malaha jinbaa isaga soo kaa dhigay Sulub.” Laba maalmood ka dib Bishaaro Wacdi, waxaa gurigii ay deganayd ugu yimid oo kaxaystay rag Somali ah oo Kaalinka 5aad ah.
Bishaaro, Hargeysa waxay joogta tan iyo 2007, waxayna ku joogtay magaca Nuuro Wacdi, ma ayna dhigi jirin shukada madow ee ay xidhaan haweenka isdada. Bishaaro guriga ay deganayd waxaa la deganaa 10 ruux oo ay ka mid yihiin walaasheed, wiil ay dhashay iyo xubno ka tirsan kooxda Jwxo-shiil, kaligeed ayaa la qabtay oo la kaxaystay. War ayaa ka fokaday wiilashii Kaalinka ee kaxaystay Bisharo wuxuu yidhi “adhiga naloo soo madho ayaanu kaxaysanaa.”
Bisharo, mar hore ayey Kenya u kici lahayd ee jwxo-shiil baa joog yidhi, wax uu ka baqayey mooyee. Bishaaro, waxay ahayd ruuxii ugu horeeyey ee loo sheego dilkii Dr. Dolal, si kale ayaana wax loogu sheegay. Waxaa bishaaro u waramay wiil ay dhashay oo Qabridahare ka yimid lase joogay markii la qabanayey, walaacbadan ayeyna ka qabtay dhinaca kooxda Jwxo-shiil.
Bishaaro dhawr goor ayey waydiisay Sulub Cabdi Axmed in si khalad ah wax loogu sheegay dilkii Dr. M s Dolal, ayna jeceshahay in ay dhabta ogaato iyo waliba xogo ay hore u ogayd oo ah in lagu yidhi Dolal Itobiya ayuu u socdaa, waana in halganka la qabtaa inta uusan dhibaato u gaysan.
Hadaba, waxaa muhiim u noqotay Jwxo-shiil, in Bisharo la aamusiiyo, si loo dilo la waa oo had iyo goorba dadbaa guriga ka buuxa inta badan iyada ilaaliya. Arinta ugu dhib yar ee Jwxo-shiil sii asturi karta mudo ayaa ah in Bishaaro Xabashi loo dhiibo, waana sida ay arintu u dhacday.
Puntland iyo Hargeysa, waxayeelo waayo halganka Somalida Ogadeeniya way gaadhsiiyeen, xiliyadan dambase dhibaatada oo dhan waxa wada waa Jwxo-shiil, daliilna waxaa u ah in kooxda Jwxo-shiil ay wada joogaan magaalooyinka labadan maamul, Cabdikarin oo kooxda abaanduule ciidan u ah Galkacyo ayuu joogaa, Sulub iyo Ilbir iyo qaar kale oo badan waxay joogaan Hargeysa. Sheek Deeq oo surmiyey kaliya ayaa Nogob ka jooga kooxda Jwxo-shiil, horena ay u soo duushay waa la dilay.
Bishaaro iyo kuwo kale oo badan oo uu Jwxo-shiil dilay ama uu dagay in ay dhibaato mutaan, waxaanu leenahay halganku dhibka idiinma gaysayn ee idinka iyo halgankaba waa dagay Eritrea iyo Jin Jwxo-shiil.